Inona no ho hita any Puerto de la Cruz ao Tenerife | Vaovao momba ny dia
Ny fitsangatsanganana any Tenerife amin'ny fialan-tsasatra dia efa mahazatra, fa amin'izao fotoana izao dia manana fizahan-tany manerana ny nosy isika. Na izany aza, tokony ho fantatsika fa ny fizahantany dia nanomboka tamin'ny fomba marina tao amin'ny tanànan'ny Puerto de la Cruz, miorina amin'ny lohasaha Orotava. Androany dia tsy iray amin'ireo toerana mpizahatany indrindra io fa be mpitsidika azy eto amin'ny nosy.
Ho hitantsika eo inona no ho hita any Puerto de la Cruz ao Tenerife, toerana manolotra morontsiraka sy fialamboly. Any avaratry ny nosy no misy azy ary afaka tsidihina ao anatin'ny iray andro monja. Ny zavatra tsara momba ireo nosy ireo dia azo tsidihina mora foana izy ireo raha manana fiara manofa hivezivezena isika.
2 Zaridaina botanika
3 Ny trano mavo
5 Hermasan'i San Amaro
6 La Paz fomba fijery
Ity tanàna miorina ao avaratry Tenerife ity dia iray amin'ireo toerana azonao isafidianana hipetrahana raha te-hitsidika ny nosy ianao, satria maro amin'ireo teboka mahaliana no manakaiky azy. Tanàna kely fanjonoana izy io tamin'ny voalohany ary avy eo seranan-tsambo nanatsara ny toekarena ary lasa toerana fizahan-tany voalohany teto amin'ny nosy. Avy amin'ity tanàna ity ianao izao dia afaka mandray fiara fitateram-bahoaka hitsidihana teboka samihafa eto amin'ny nosy, avy any avaratra ka hatrany amin'ny Mount Teide. Izany no antony mety hahatonga azy ho toerana mety hifindra monina manerana ny nosy ary azo tsidihina ao anatin'ny iray andro monja mba hahitana ireo toerana lehibe ao aminy.
Iray amin'ireo toerana izay ny mpitsidika tena tia azy ireo rehefa mankany Puerto de la Cruz dia tsy isalasalana fa zaridaina fambolena tsara tarehy izy io. Ity zaridaina tsy mampino ity dia noforonina tamin'ny 1788 mba hambolena karazan-tropika any amin'ny faritany espaniola noho ny toetr'i Tenerife. Manana fandaharam-potoana manomboka amin'ny 9.00 maraina ka hatramin'ny 18.00 tolakandro ary afaka miditra ianao amin'ny alàlan'ny fandoavana fidirana mora. Mirefy hektara roa izy io ary hahatsapa fa nafindra tany amin'ny toerana tropikaly izahay, satria amin'ity zaridaina Acclimatization ity dia afaka mahita isika manomboka amin'ny hazo rofia mankany amin'ny hazo tropikaly.
Ny trano mavo
Ity trano ity dia trano rava ankehitriny fa tena nilaina tokoa ho an'ny tantaran'ny nosy. Ao amin'ity trano ity ianao nahita ny foibe voalohany amin'ny fandinihana primatolojika avy any Espana, natolotry ny Akademia Prussia momba ny siansa any Berlin ary notarihan'ny psikology Gestalt, Köhler. Amin'izao fotoana izao, na dia nambara ho Toerana mahaliana ny kolontsaina taona lasa aza izy io, dia atahorana hanjavona izany noho ny tsy fitahirizam-bolany. Fa mahafinaritra foana ny mahita ny tantaran'ny firenentsika.
Ity dia iray amin'ireo toerana izay matetika mitsidika ny fianakaviana. Momba ny a zoo ivelan'ny trano lehibe izay misy ihany koa zavamaniry tropikaly tompony. Saingy tsy isalasalana fa misy zavatra mahasarika mpitsidika an'arivony, izay ny seho misy feso feso sy orcas. Ho fanampin'ireto biby ireto dia azo atao ny mahita hafa maro hafa, toy ny flamingo, gorila, jaguar, sloth, anteater na panda mena. Manana faritra maromaro izy ireo, ao anatin'izany ny aquarium, dolphinarium, ny faritra orca ary ny iray hafa misy penguin. Io dia iray amin'ireo toerana ahafahanao mandany fotoana bebe kokoa, koa raha te hankafy azy izahay dia tsara kokoa ny manafatra tolakandro na maraina.
Hermasan'i San Amaro
Ity hermitage ity, Any amin'ny faritr'i La Paz no antitra indrindra ao an-tanàna. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary tamin'izany fotoana izany dia faritra Guanche, na dia androany aza dia efa toerana afovoany izay voahodidin'ny tranobe fizahan-tany vaovao. Izy io dia hermitage kely izay mifamatotra akaiky amin'ny tantaran'ny tanàna taloha, noho izany dia mendrika jerena, satria tsy ho ela ny fitsidihana. Teo akaiky teo dia nisy tranokala arkeolojika aboriginal hita teo amin'ny hantsam-bato, manondro ny toerana misy nezropolis manan-danja.
La Paz fomba fijery
Raha te hanana vitsivitsy isika fomba fijery tsara amin'ny Ranomasimbe AtlantikaTsy maintsy mankany amin'ny Mirador de la Paz isika. Manolotra fomba fijery mahafinaritra an'ny ranomasina haka sary vitsivitsy ary koa ny moron-dranomasin'i Martiánez ary ny farihy any aoriana. Ity dia iray amin'ireo balconies malaza indrindra eto an-tanàna izay mamela antsika hanana fomba fijery tsara momba ilay faritra avy any amin'ny havoana, noho izany dia teboka iray hijanonana haka sary ary hiala sasatra.
Amin'ny nosy Tenerife dia tsy afaka malahelo amoron-dranomasina, satria iray amin'ireo manintona azy io. Eo am-pototry ny hantsam-bato izay nahitana ny fametrahana azy io ary eo akaikin'ny fijerin'i La Paz. Ity morontsiraka fasika maizimaizina ity dia miorina akaikin'ny toerana antsoina hoe Lago Martiánez ihany koa, toerana iray misy dobo filomanosana noforonin'i César Manrique tamin'ny taona 70 mba hisarihana ny fizahan-tany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita any Puerto de la Cruz, Tenerife
Inona no ho hita any Santorini